Wednesday May 09, 2018 - 14:45:37 in Wararka by Super Admin
Fagaara kuyaal degmada Sablaale ee wilaayada Islaamiga Sh/Hoose ayaa dhagax lagula dilay haweenay muslimad ah oo fal zina ah ku dhacday.
Maxkamadda Islaamiga Sh/Hoose ayaa maanta Barqadii Xukun Rajmi (Dhagax dil ah) Ku Fulisay Haweeenay lagu magacaabo Shukri Cabdullaahi Warsame oo hal Mar 11 Nin isku guursatay.
Qaadiga Maxkamadda islaamiga Sh/Hoose oo goob fagaare ah ka akhrinayay xukunka lagu riday haweenayda ayaa sheegay in ay qiratay dhammaan dambiyada lagusoo eedeeyay oo ahaa in ay guursatay 11 Nin hal mar, xaaladda caafimaad ee Shukri Cabdullaah Warsame ayaa aheyd mid wanaagsan waxayna maxkamadda ka hor sheegtay in wax cudur daar ah aysan laheyn ayna ku qanacsantahay in lagu fuliyo waxa ay kan hesho shareecada islaamka.
Dadkii soo xaadiray fagaarihii xadku ka dhacayay ayaa aad ula yaabay dhacdadan waana arrin mar la arag ah in haweenay ay hal mar wada guursato 11 Nin oo aan iska warqabin.
Shukri Cabdullaahi oo 30 jir ahayd ayaa guursatay 11 nin, waxaana ka dhintay hal nin mid kalana wuu furay, iyadoo haatan si qarsoodi ah xaas ugu ahayd 9 Nin sida laga sheegay goobta uu ka dhacay xukun oo ay usoo daawasho tageen dad badan oo ku dhaqan Sablaale.
Waxa ay ahayd hooyo leh 8 caruur ah oo todobo kamid ah ay udhashay ninkii ugu horeeyay ee waalidkeedu ay siiyeen laguna ogaa.
Sidee loo ogaaday Ragga ay isla guursatay Shukri.?.
Shukri ayaa waxaa isku qabsaday laba nin oo mid kasta uu ku doodayey in ay xaas u aheyd waxaana markii dambe soo baxay rag kale oo iyaguna sheegtay in shukri ay udhaxday oo xaas ay u ahayd.
Mid kamid ah qudaada Xarakada Al Shabaab oo xukunka riday ayaa goobta ka sheegay in Shukri Cabdullaahi ay qiratay eedda loo soo jeediyay.
Gabadhan taa’ibadda ah, islamarkaana loo rajeynayo in uu Allaah cafiyo ayaa muujineysa sida maxaakiimta islaamiga ah ay mar weliba u tadbiiqiyaan axkaamta kala duwan ee Shareecada Islaamka, halka meelaha ay gacanta ku hayaan Shisheeyaha ay falalka khilaafsan diinta Islaamka ay caadi ka tahay, sida Zinada iyo waxyaabaha lamidka ah.
Xukunkii kan ka horeeyay oo ka dhacay degmada Saakoow ee wilaayada islaamiga ah Jubbooyinka ayaa waxaa lagu fuliyay haweenay laba nin isla guursatay oo lagu magacaabi jiray Xabiibo Cali Isaaq.
Wilaayaatka islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya waxaa kajira maamullo islaami ah oo tadbiiqaya ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna dadku ku heleen ammaan iyo kala dambeyn taam ah.
Xukun Gacan Goyn ah oo ka dhacay degmada Jilib ee Jubbada dhexe.
Al Shabaab Oo Weerar Askar Lagu Dilay Ka Fulisay Degmada Balcad Ee Sh/dhexe.